Makore 40 ari nyamukuta	Monday, 23 July 2012 15:05	naMuchaneta Chimuka“BASA rehunyamukuta rinoda kuita zvekudaidzwa naMwari kuti
Hushamwari ngahuve hwekuvakana	Thursday, 21 June 2012 10:40	naMuzvare Thembikosi ari kuMASVINGO Makadiniko madzimai nevanasikana kumativi
Batai varume zvakanaka	Thursday, 31 May 2012 07:23	naMai Mutsigiri vari muHarareVAKURU vanoti chawawana batisisa mudzimu haupe kaviri. Mune rombo rakanaka imi madzimai munobat
Mutowehove mumwe chete	Thursday, 24 May 2012 07:02	naAmai Rufaro vari kuBINDURA RUFARO kwamuri madzimai!Ndinovimba kuti tose tiri kutora chinzvi-mbo chedu
Ngwarirai vakomana ndonda	Thursday, 17 May 2012 07:40	naPrincess Stella ari muHARAREMakadii vasikana kumativi mana enyika? Ini ndinofara zvangu.
Madzimai ngatishande kuti mhuri ifare	Thursday, 03 May 2012 07:35	naMai Mutsigiri vari muHARARESHOKO raMwari rinoti usada hope kuti usazova murombo.
Gutsikana newako	Thursday, 12 April 2012 07:53	naMai Prosper vari muHarareCHOKWADI chinetenge chatove chirwere chapinda murudzi rwedu vatema chekutorerana madzimai nevarume zuva rakacheka nyika.
Ndirwireiwo pamweya yemabarika	Thursday, 05 April 2012 09:48	naPrincess Stella ari muHARAREMAKADIIKO vasikana kwese-kwese kwamuri? Ini ndinofara zvangu.
Vasikana musatungamirire varume mukuroora	Thursday, 29 March 2012 08:40	naMuzvare Ntombizana ari kuMASVINGONERIMWE zuva ndichienda kumba nemuchovha weveruzhinji uri musi wesvondo ndichibva kukereke mukombi mandaiva makapinda mumwe musikana achipopota pamwe nekuzhamba pambozhanhare yake.
Madzimai musatye kutora zvigaro	Thursday, 22 March 2012 09:17	naMuchaneta Chimuka MADZIMAI akakurudzirwa kuti asatye kutora zvigaro zvepamusoro mumabasa akasiyana-siyana senzira yekuvasimudzira pamwe nekuenzanisa mikana yavo nevanhurume.
Hama yemurume ngaibatwe samambo	Thursday, 08 March 2012 09:59	naMai Mutsigiri vari muHARAREAKURUMA nzeve ndewako mwana wamai, angu mashoko kwauri mudikani nhasi ndinoti “A customer is a king” sekutaurwa kwazvinoitwa pachingezi.
Sarudzo yemusikana	Thursday, 01 March 2012 07:17	naPrincess Stella ari muHARAREMAKADII vasikana kwese kwese kwamuri? Ini ndinofara zvangu.
« Start Prev 1 2 Next End »	Page 1 of 2	Search	Sponsored Links